4 Ụzọ na Olee otú nkwado ndabere na mpaghara iPhone
Apple si iOS 8 emesịa na-eji na Sept 17, 2014, ugbu a, ị na-aga imelite ka iOS 8 n'elu ikuku ma ọ bụ site iTunes, ma Apple agwa na ị mkpa ọ dịkarịa ala 4.6 GB ma ọ bụ karịa free ohere (The chọrọ free ohere bụ dị iche iche dabeere na gị iPhone nlereanya). Enweghị zuru ezu ohere maka iOS 8 update? Ọ bụ dịghị mkpa, i nwere ike ndabere kọntaktị, music, video, photos na ndị ọzọ gị iPhone na kọmputa ma ọ bụ ígwé ojii, na mgbe ahụ ihichapụ ha si gị iPhone onwe elu ohere. Ọ bụrụ na ị na-ezuru ohere, ị ka na-atụ aro ka a zuru iPhone ndabere, bụrụ na ị nwere ike ata ahụhụ site na a nnukwu data ọnwụ mgbe ihe na-aga na-ezighị ezi. Ebe a, ga-amasị m na-egosi gị 4 ụzọ na otú ndabere iPhone nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Method 1. Olee nkwado ndabere na mpaghara iPhone na MobileTrans na 1 Pịa Method 2. Olee nkwado ndabere na mpaghara iPhone ka iTunes Method 3. Olee nkwado ndabere na mpaghara iPhone site na iji iCloud Method 4. Olee nkwado ndabere na mpaghara Jailbreak iPhone
Method 1. Olee nkwado ndabere na mpaghara iPhone na MobileTrans na 1 Pịa
Ndabere iPhone na kọmputa na 1 click!
Ndabere kọntaktsị, kalinda, ozi, audio, video na foto site na iPhone na kọmputa.
Ndabere iPhone na efu data ọnwụ, 100% mma.
Weghachite nkwado ndabere na mpaghara nyefee ka iPhone, Android na Nokia (Symbian) ekwentị.
Full dakọtara na iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5s / 5c / 5 / 4S / 4 / 3GS mgbe na-agba ọsọ iOS 9/8/7/6/5.
Cheta na: The Mac version anaghị akwado na-ebufe data ka / si Nokia (Symbian) ekwentị.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone ka Computer
Mgbe echichi, malite a iTunes ndabere ọzọ na kọmputa. Mgbe ya isi window egosi na n'elu, họrọ Back Up Your iPhone mode na pịa ya ime na.
Jikọọ gị iPhone na kọmputa na eriri USB. Mgbe ghọtara, gị iPhone ga-emere na n'aka ekpe.
Nzọụkwụ 2. ndabere iPhone kọntaktị, ozi, Photos, Music, Kalinda na Video
Gaa n'etiti window, họrọ ọdịnaya na ị chọrọ ndabere. Mgbe ahụ, pịa Malite Copy. Mgbe ahụ, software ga ndabere ọdịnaya gị iPhone na kọmputa. Mgbe ị na-atụfu data ma ọ bụ inwe a ọhụrụ ekwentị, ị nwere ike weghachite nkwado ndabere na mpaghara nyefee ya.
Method 2. Olee nkwado ndabere na mpaghara iPhone ka iTunes
Iji ndabere gị iPhone, otu n'ime kasị-n'ọtụtụ ebe na ụzọ bụ iji iTunes. Na ya, ị na-enwe ike ndabere ọtụtụ n'ime data na gị iPhone. Na-eje ije site na nzọụkwụ-site-nzọụkwụ nkuzi na otú iji iTunes ime iPhone ndabere.
1. Gịnị iTunes ndabere?
iTunes Akwadoo elu ọtụtụ n'ime data na gị iPhone, gụnyere Igwefoto Roll, kọntaktị, na kọntaktị na mmasị, kalenda, safari, autofill, cache / nchekwa data, ndetu, mail akaụntụ, akpọ akụkọ ihe mere, ozi, ozi olu ozi olu, olu memos, netwọk ntọala, Eriri Ngakọ Igodo, ngwa ahịa ngwa data, ngwa ntọala, na-ngwa ịzụrụ, egwuregwu center akaụntụ, na akwụkwọ ahụ aja, ọnọdụ ọrụ mmasị, arụnyere profaịlụ, map na-azọpụta aro degharịa na ndị ọzọ.
2. Nzọụkwụ na ndabere iPhone na iTunes?
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone na kọmputa site na eriri USB.
Nzọụkwụ 2. Open iTunes.
Nzọụkwụ 3. Na ekpe sidebar nke iTunes, pịa gị iPhone n'okpuru NGWAỌRỤ. Nke a na-ahụ iPhone akara panel ke ziri ezi. Nzọụkwụ 4. Na Summary taabụ, gaa na Backups ngalaba. Pịa Back Up Ugbu a. Kwụpụ 5. The ndabere usoro amalite. Biko chere ruo mgbe ọ na-agwụ agwụ.
3. Nzọụkwụ encrypt iPhone ndabere
Ka ị na-iPhone ndabere nchebe, ị nwekwara ike encrypt iPhone ndabere. Encrypting iPhone ndabere pụtara na ọ bụ nanị onye ihe maara paswọọdụ ike wepụ data si ndabere. Ọ bụrụ na ị na-echefu paswọọdụ na chọrọ na-amalite ọzọ, ị ga-arụrụ a zuru software weghachi ma họrọ melite a ọhụrụ iPhone mgbe iTunes kpaliri gị iji họrọ ndabere site na nke iji weghachi. N'okpuru ebe bụ zuru nkuzi, na-eso ya.
Nzọụkwụ 1. gị iPhone akara panel, gaa na Summary ebi ndụ, nne Mmetụta encrypt iPhone backups.
Nzọụkwụ 2. A dialog Pop bu mmiri ogwu-elu, na-arịọ gị ịbanye paswọọdụ maka iPhone ndabere. Tinye paswọọdụ na nkwado ndabere na mpaghara usoro amalite-akpaghị aka.
4. Olee ebe Chọta iPhone ebe?
Ịga nke ọma na-akwado gị iPhone ka iTunes? Ị pụrụ iji jide n'aka na ebe iPhone ndabere bụ. iTunes ndabere ga-azọpụta na kọmputa gị, ma nkwado ndabere na mpaghara ọnọdụ dị iche site na kọmputa os. Ebe a na-zuru ezu iTunes ndabere ọnọdụ, i nwere ike a ego.
Method 3. Olee nkwado ndabere na mpaghara iPhone site na iji iCloud
iCloud bụ ụzọ ọzọ na Apple awade nkwado ndabere na mpaghara iPhone, ma Ọ na-azọpụta iPhone na nkwado ndabere na Apple ígwé ojii nkesa.
1. Gịnị iCloud ndabere?
iCloud backups ịzụta akụkọ ihe mere eme nke music, fim, TV na-egosi, ngwa, na akwụkwọ, foto na vidiyo na igwefoto Roll, ngwaọrụ ntọala, ngwa data, n'ụlọ ihuenyo na ngwa nzukọ, iMessage, ederede, na MMS ozi, ụdaolu, visual Ozi olu.
Cheta na: Apple nanị na-enye gị 5GB free nchekwa nke iCloud. Jide n'aka na ị na-ezuru ojii nchekwa tupu akwado iPhone ka iCloud. Ma ọ bụ, ị nwere ike ịzụta 10 GB / 20 GB / 50 GB iCloud nchekwa. Lelee price maka iCloud nchekwa nweta nkwalite.
2. Nzọụkwụ na ndabere iPhone ka iCloud
Nzọụkwụ 1. Hụ WiFi netwọk na agbanwuru gị iPhone.
Kwụpụ 2. Gaa Ntọala> iCloud Nzọụkwụ 3. Ọ bụrụ na ị banye na iCloud akaụntụ, ihe ịrịba ama na ya. Nzọụkwụ 4. Kpatụ Nchekwa & ndabere> ndabere Ugbu a.
Comparison n'etiti iTunes, iCloud na Wondershare MobilerTrans
Uru Ndabere kasị iPhone data; Ndabere iPhone ka ígwé ojii;
ọ dịghị mkpa kọmputa; 1. Dị nnọọ 1 click, nnọọ ngwa ngwa;
2. Ndabere na-abụghị zụrụ ọdịyo na video;
3. Ndabere Photo Library;
Cons 1. Oke-ewe oge;
2. Na-ndabere na-abụghị zụrụ ọdịyo na video; 1. mkpa oge dị ukwuu;
2. Dị nnọọ 5 GB nke free nchekwa, n'ihi na ndị ọzọ ohere, ị chọrọ ịkwụ ụgwọ;
3. Nwere ike ọ bụghị ndabere nile data on iPhone; 1. na-aṅaghị ndabere ngwa data, ngwaọrụ ọnọdụ, akaụntụ, wdg
Method 4. Olee nkwado ndabere na mpaghara Jailbreak iPhone
Ndị a ngwa ọdịnala dị maka iPhone nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na ya na-enweghị jailbreak. Gịnị ma ọ bụrụ gị iPhone bụ jailbroken? Ị ga-chọrọ nkwado ndabere na mpaghara jailbreak ngwa, jailbreak ntọala na Tweaks. M na-achọgharị ndị internet na mesịrị chọta 2 ndị ukwu.
PKGBackup bụ ihe dị egwu ngwa, na nke ị na-enwe ike ndabere jailbreak ngwa, Tweaks, jailbreak ntọala na ndị ọzọ data na gị jailbroken iPhone. Ọ bụrụ na ị nwere Dropbox akaụntụ, ị nwekwara ike ndabere iPhone data na ya, n'ihi ya, ị nwere ike mfe ịnweta ha n'ebe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-adịghị a Dropbox akaụntụ, ọ ga-ndabere na-azọpụta iPhone data na adreesị akwụkwọ kọntaktị. Otu ụbọchị mgbe ị chọrọ iweghachi gị iPhone, ị nwere ike mmekọrịta gị iPhone na iTunes na-eji adreesị akwụkwọ kọntaktị iweghachi gị iPhone. Nanị oghom o nwere ike ịbụ bụghị ọrụ-enyi na enyi. Ọ bụ obere ike ịghọta na mbụ. Ma ọ bụ nnọọ utilitarian.
Nzọụkwụ na-nzọụkwụ ọrụ ndu banyere otú ndabere iPhone jailbreak ngwa ọdịnala na PKGBackup >>
Dị ka PKGBackup, AptBackup a na-eji nkwado ndabere na mpaghara Cydia-arụnyere ngwa ọdịnala na gị jailbroken iPhone. Ọ nwere nnọọ mfe interface, nke na-enye gị abụọ nhọrọ: nkwado ma weghachite. Ọ na-emepụta ndepụta niile Cydia-arụnyere iPhone ngwa ọdịnala ma na-a nkwado ndabere nke a na ndepụta. Mgbe ahụ, mgbe ị nweta nkwalite ndị femụwe, ị pụrụ iji ndepụta a ka reinstall ngwa na akpaghị aka.
Nzọụkwụ 1. Wụnye AptBackup site Cydia, ị pụrụ ịchọta ya n'okpuru System ngalaba (BigBoss isi iyi).
Nzọụkwụ 2. Kpatụ ndabere ike ndepụta nke ngwa.
Nzọụkwụ 3. mmekọrịta gị iPhone na iTunes, nke mere na ndepụta Nwela synced ka iTunes .
Nzọụkwụ 4. Mgbe emelite gị iPhone ka ọhụrụ iPhone femụwe, jailbreak ọ na reinstall AptBackup site Cydia.
Kwụpụ 5. Run AptBackup na enweta Weghachi ka reinstall Cydia arụnyere ngwa ọdịnala nke ndị na ndepụta na kwadoo site na iji iTunes.
3 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara iPad tupu iOS 8 ọjọọ
3 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara iPod aka maka iOS 8 ọjọọ
5 ihe na-eme tupu upgrading ka iOS 8
iOS 8 Update Nchọpụta nsogbu
Top 5 Atụmatụ na adị iOS 9/8
Downgrade si iOS 8 ka iOS 7
Naghachi Text Ozi na iPhone mgbe iOS 8 ọjọọ
Ibufee ọdịnaya site na Android ka iPhone 6
2 Ụzọ Idozi iPhone White ihuenyo nke Ọnwụ
Otú nyefee Verizon Ndi ana-akpo ka iPhone
> Resource> iPhone> 4 Ụzọ na Olee otú nkwado ndabere na mpaghara iPhone tupu upgrading ka iOS 9/8